Wacaal darey ah: Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo Bosaaso lagu dilay – Radio Daljir
Wacaal darey ah: Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo Bosaaso lagu dilay
Maarso 8, 2019 10:43 b 0
Allaha unaxariistee waxaa goor dhawayd magaalada Bosaaso lagu dilay Suldaan Bashiir Muuse koonte oo kamid ahaa Isimada Puntland ugu fir fircoon .
Suldaanka ayaa waxaa lagu dilay gudaha Masjidka Mubaarig ee xaafada Laanta Hawada xiligii salaada Jicaha lagu guda jiray waxaana toogtay kooxo baastoolado ku hubaysan kuwaas oo durbadiiba goobta isaga baxsaday.
lam oga ilaa iyo haatan sababta ka dambaysa dilka Suldaanka, balse magaalada Bosaaso ayaa mudooyinkii udabeeyay waxaa caado ka noqotay dilka dadka haldoorka u ah bulshada oo ay gaysanayaan Ururada Al-shabaab iyo Daacish.
Ciidamada amniga ayaa goobta uu dilku ka dhacay soo gaaray, mana jirto ilaa iyo haatan cid loo soo qabtay dilka Suldaabka.
Waxaa iswaydiin mudan sababta dadkii ku tukanayay Masjidka ee tirada badnaa ay uqaban waayeen gacan ku dhiiglayaashii dilay Suldaanka ?
Dilka Suldaanka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xili magaalada Bosaaso ay ku sugan yihiin ciidamo farabadan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada Booliska Puntland jen.Muxiidiin Axmed Muuse.
Wasiirkii Dastuurka Soomaaliya oo ku geeriyooday Imaaraadka Carabta